စာလုံးများနှင့် ညနေခင်း | Lionslayer : The Legend
Tuesday 21st June 2011
Apple Sketch on Wacom Bamboo
Marina Boulevard က Starbucks ကော်ဖီဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တော့ မူသူးက ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ သူကတော့ Apple နဲ့ iOS platform တွေမှာ မြန်မာ၊ လာအို၊ ခမာ အပါအဝင် ဘာသာစကားအမျိုးပေါင်း တစ်ဒါဇင်ကျော်အတွက် ဖောင့်ရေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Lion မှာ မြန်မာစာ စပါတာ မြန်မာတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ အိုင်တီလောကမှာ တော်တော်လေး လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ Commercial OS တွေထဲမှာ ဒါဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူလည်းဒါကိုသိတော့ တော်တော်ပျော်သွားပုံရပါတယ်။ မြန်မာတွေနဲ့ ဖောင့်ပြဿနာအကြောင်းပြောတော့ သူက Indian Language တွေမှာလည်း ဒီပြဿနာရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ အဓိက OS တွေနဲ့ Google မှာ ယူနီကုဒ်စသုံးပြီးနောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း လူတိုင်းယူနီကုဒ်သာ သုံးလာကြတော့ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ သူ့ဖောင့်အတွက် Bug တွေကို တစ်ဖိုင်တွဲလုံး ပရင့်ထုတ်ထားတာ တွေ့ပါတယ်။
သူက သူ့ဆီရောက်နေတဲ့ မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကွန်ပလိန်းအီးမေးတွေကို ထုတ်ပြပါတယ်။ တစ်စောင်မှာ ယူနီကုဒ်ကို ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ရိုက်ပြထားပြီးတော့ အမှန်မမြင်ရတဲ့အတွက် ဒီဖောင့်ဟာ “မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အသုံးမကျတဲ့ဖောင့်ပါ” လို့ပြောထားပါတယ်။ နောက်စာတစ်စောင်မှာတော့ “သူ့ဖောင့်မှာပါတဲ့ Glyphs အက္ခရာပုံစံတွေဟာ ရုပ်ဆိုးကြောင်းနဲ့ အမှားအများအပြားပါကြောင်း၊ မူသူးဟာ မြန်မာမဟုတ်တဲ့အတွက် မြန်မာစာကို မြန်မာလူမျိုး သူ့ကဲ့သို့ မသိတဲ့အတွက် မြန်မာဖောင့်ကိုလုပ်တာဟာ မသင့်တော်ကြောင်း၊ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်က လုပ်နေတဲ့ဖောင့်တွေဟာ လှပပြီးတော့ အမျိုးအစားစုံလင်ပါကြောင်း” ပြောထားပါတယ်။ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်တော့ Homepage ကစလို့ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာမို့လို့ပေပဲ။ ဘယ်သူဆိုတာတော့ မှန်းလို့ ရလောက်မယ်ထင်တယ်။ ​မူသူးက သူ့ဖောင့်တွေဟာ ဒီလောက်တောင်ပဲ ရုပ်ဆိုးလား၊ မှားနေလားဆိုတော့ အဲလောက်လည်းမဟုတ်ကြောင်း လက်ခံလို့ရတဲ့အဆင့်ရှိကြောင်း ပြန်ပြောရပါတယ်။ သူ့အိတ်ထဲမှာလည်း မြန်မာဂျာနယ်တွေ တစ်ထပ်ကြီး ပါပါတယ်။ နေ့လည်ကမှ ပင်နီဆူလာပလာဇာ သွားဝယ်ထားတယ်ပြောပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ကိုးကားရှာရတာခက်တဲ့အပြင် အွန်လိုင်းက မြန်မာစာအများစုကလည်း Encoding တလွဲဖြစ်နေတာများလို့ ကိုးကားဖို့၊ တိုက်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့ ခက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို Myanmar NLP နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အကြောင်း၊ အကိုးအကားလိုရင် သူတို့ဆီမှာ အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
Apple မှာပါတဲ့ ဖောင့်တွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MN ပါတဲ့ ဖောင့်တွေက သူရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ MN က ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ မေးကြည့်တော့ သူ့နာမည် အတိုကောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရယ်ပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ Sangam ကတော့ သက္ကတနဲ့ ပါဠိ ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်စုစည်းမှု၊ ပေါင်းစည်းမှု ပေါင်းဆုံမှု လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ Myanmar MN က Document တွေအတွက် Default ဖောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ Myanmar Sangam MN က UI အတွက် Default ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင့်တစ်ခုစီမှာ Regular နဲ့ Bold နှစ်ခုစီပါပြီး ဖောင့်နှစ်ခုအတွက်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ဖောင့်လေးမျိုးရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်။
Some Bugs in Myanmar Fonts
(၁) အောက်မြစ် + အသတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် ၅.၂ မှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေ ပါလာပါတယ်။ စကောကရင်အတွက်လည်း မြန်မာအောက်မြစ်ကို ယူသုံးပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ယူနီကုဒ်မှာ ဒီအတွက် ကုဒ်ပွိုင့်သတ်သတ် ထပ်တောင်းလို့ မရတော့ပါ။ အောက်မြစ် (Dot below) ဟာ အောက်မြစ်သာမက သရအဖြစ်လည်း သုံးထုံးရှိပါတယ်။ Normalize လုပ်တဲ့အခါမှာ အောက်မြစ်အသတ် ရိုက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အသတ်အောက်မြစ် ရိုက်ထားသည်ဖြစ်စေ အောက်မြစ်ကို အသတ်ရှေ့မှာ ထားစီဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စာရိုက်ရင်တော့ ရေးထုံးအတိုင်း အသတ်အောက်မြစ် ရိုက်နိုင်ပြီးတော့ Encoding စီတဲ့အခါမှာ အောက်မြစ်အသတ် ပြန်စီပါမယ်။ မူသူးက ဒီရှေ့က Document စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖတ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို လွတ်သွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြန်ရှာပြရပြီး ယူနီကုဒ်က မာတင်ဟော့စ်ကင် ဆီကိုပါ အတည်ပြုချက် လှမ်းတောင်းရပါတယ်။ Apple မှာ ဒီကိစ္စအတွက် အစည်းအဝေးလုပ်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအကျိုးနဲ့ မနည်းရှင်းပြခဲ့ရတယ်လို့ မူသူးက ပြောပါတယ်။ ဖောင့်ပြင်ပြီးရင်တော့ အောက်မြစ်အသတ်ပဲရိုက်ရိုက် အသတ်အောက်မြစ်ပဲရိုက်ရိုက် အမှန်ပြနိုင်အောင် ပြင်ထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကီးမက်ဂျစ်သုံးရင်တော့ Normalize လုပ်ပြီးသား Encoding အတိုင်း ရပါမယ်။
(၂) နောက်တစ်ချက်ကတော့ နငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မြစ်နဲ့ပေါင်းရင် နငယ်ဟာ တိုသွားပါတယ်။ ပါဌ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် ဟထိုး၊ ချောင်းငင်၊ ရရစ်နဲ့တွေ့မှသာ နငယ်အတိုဖြစ်ကြောင်း ပြောရပါတယ်။
(၃) ရကောက်နဲ့ ဟထိုးတစ်ချောင်းငင်တွေ့ရင် တစ်ချောင်းငင်က ရကောက်အောက်မှာသာ နေပါတယ်။
(၄) မြန်မာ ပန်ဂရမ်ထဲမှာ ယူသုံးထားတဲ့ ဝဍ္ဎန က ဍ္ဎက မှားနေပါတယ်။ ဍရင်ကောက်က အပေါ်ရောက်ပြီး ဎရေမှုတ်က အောက်ကဝိုက်ထားပါတယ်။ ဘာသာဗေဒအရ အဲဒီပုံက မှန်ပါတယ်။ ဟိုးရှေးရှေးကလည်း ရေးထုံး တစ်ခုတလေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုခေတ်မှာ ရေးထုံးက နှစ်ခုချိတ်လျက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြရပါတယ်။
(၅) အက္ခရာဤ နဲ့ ဏကြီး မှာ မလိုအပ်ဘဲ အတက်တွေပါနေပါတယ်။ အက္ခရာဣ ကတော့ ကကြီးနှစ်လုံးဆင့်ပုံဖြစ်ပြီး အတက်ပျောက်နေပါတယ်။
(၆) စာလုံးတွေရဲ့ အပေါ်အောက် ညှိတာတွေ ရှည်တာရှည် တိုတာတို ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့တော့ Typeface နဲ့ ဒီဇိုင်းကိုငဲ့ပြီး စာလုံးအရွယ်ညီအောင် အတိုအရှည်တွေ အမျိုးမျိုး လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲဒါက ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ တချို့က လုံးလုံးလက်ခံပေးလို့မရပါလို့ ပြောရပါတယ်။ အဲဒါ အင်မတန်လွယ်ကြောင်း၊ လက်ရေးလှလေ့ကျင့်သလို မျဉ်းလေးကြောင်းဆွဲပြီး အထဲဝင်အောင်သာ ညှိလိုက် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
(၇) ရပ္ပ (Repha) (ကင်းစီးတင်သလို ရကောက်ကို ဗျည်းပေါ်မှာတင်တာ) က မွန် Vowel E နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူနေပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ရှေးကသုံးလား မှားလား မှန်လား ပြောမရသေးပါ။ ပုဂံကျောက်စာတွေ ပြန်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ ရကောက်အသေးလေး အပေါ်တင်တာ တွေ့ဖူးတယ်။ Myanmar NLP ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကိုးကား ပြန်ရှာရပါမယ်။
(#24th June 2011# Repha’s shape is confirmed to be English letter6or open quote ‘ above the consonant.)
ကျန်တာတွေကတော့ အောက်မြစ်၊ ဗျည်းတွဲ၊ ချောင်းငင်၊ စတာတွေရဲ့ နေရာအထားအသိုတွေဖြစ်ပါတယ်။
တော်တော်လေး စကားပြောပြီးတော့ ကိုတင်မျိုးထက် ရောက်လာပါတယ်။ သူကတော့ မာစတာပိစ်ယူနီစံရဲ့ မူလပထမ ဖန်တီးရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းနစ်ပန်ဂိုးအတွက် အရင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Apple အတွက်ရေးပေးသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုငွေထွန်းကတော့ ရန်ကုန်မှာ ဗာဟီရများနေလို့ မလာနိုင်တော့ပါ။ မူသူးက မကြာခင်ထွက်တော့မယ့် AAT အသစ်မှာ Positioning ပါလာတော့မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာအပါအဝင် Brahmi အခြေခံ ဘာသာစကားတွေအတွက် ဖောင့်လုပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က စင်္ကာပူတစ်ခုတည်းမှာတင် မြန်မာလူမျိုး နှစ်သိန်းခွဲကျော်ရှိပြီး တော်တော်များများက အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက်တွေသုံးကြတဲ့အကြောင်း၊ သုံးစွဲသူအရေအတွက် မနည်းလှတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ သူက အဲဒီ Stats နဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို Apple ကို ပြနိုင်ရင် နောက်သုံးလေးလအတွင်းမှာ ထွက်လာမယ့် iOS5 မှာ မြန်မာစာပါလာအောင် သူကြိုးစားပေးလို့ရကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပါတယ်။ ဒီ့အတွက် Ornagai နဲ့ iMyanmar ဒေါင်းလုဒ်အရေအတွက်ဟာ မြန်မာ iOS အသုံးပြုသူအများစုရဲ့ အရေအတွက်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒီလို Apple က Developer တစ်ယောက်နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ရတာ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဘာတွေလိုနေလဲ၊ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ ဘာတွေကူညီနိုင်သလဲ ဆိုတာတွေသိသွားလို့ တော်တော် အကျိုးရှိတယ် ပြောနိုင်ပါတယ်။ Lion မှာတင်မက iOS မှာပါ မြန်မာစာပါလာတော့မယ်ဆိုရင် အတို်ငး်ထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားပါပဲဗျား။
Tags: apple, ios myanmar font, lion, lion OSX, Myanmar, myanmar unicode font, osx, Unicode
7 Responses to “စာလုံးများနှင့် ညနေခင်း”
July 1, 2011 at 8:52 pm
Why Apple is so stupid to haveacrippled Burmese fonts for their Lion OS ?
Why don’t they tell Xeno developer to do for Unicode Ver 5.2 ?
July 1, 2011 at 9:05 pm
Believe or not! Xenotype has more issues than MN fonts.
I think iDhamma application is also accountable in terms of Myanmar apps downloading. It’s widely used whenever I’m om Bus or MRT in Singapore morning peak hour.
it should be 40K+
itune connect only show last 26 weeks data (6 months). 11K is for last6months only
June 22, 2011 at 4:03 am
Ornagai Free , 9,569 unit downloaded
Ornagai is over 5,000 unit downloaded
Dhama Stream , 1,221 unit downloaded
June 20 , 2011 statics.
June 22, 2011 at 4:38 am
Thanks. That helpsalot 🙂
10k for iPhone n 1k for iPad (iMyanmar app by Ko Tun). There are at least 11K of Myanmar Language users in iOS platform . 🙂
LeaveaReply to Nyana